Galmudug oo maanta Qabaneyso Doorashada afar kursi oo kamid ah Golaha Shacabka. – XAMAR POST
Galmudug oo maanta Qabaneyso Doorashada afar kursi oo kamid ah Golaha Shacabka.
Waxaa maanta lagu wadaa in Magaalada Dhuusamareeb ee Casimadda Dowlad Goboleedka Galmudug ay ka dhacdo Doorashada afar kursi oo kamid ah Golaha Shacabka kuwaa oo kala ah #HOP139 #HOP049 #HOP051 #HOP061
Guddiga Doorashada Galmudug ayaa sidoo kale shaciyay Musharixiinta u tartamaya kuraasta Golaha Shacabka ee maanta lagu dooranayo Magaalada Dhuusamareeb.
Kursiga Hop-#139 oo Maanta Doorashadiisa la qabanayo ayaa waxaa ku tartamaya Musharixiinta kala ah CabdiSamad Maxamuud Xassan, iyo Xamd Shire Cali, Waxaana loo saadaalinayaa in uu ku guuleysan Doono CabdiSamad Maxamuud Xassan.
Kursiga Hop-#049 oo isna kamid ah Kuraasta Maanta Doorashadooda la qabanayo waxa kuwada Tartamaya, Mustaf Shiikh Cali dhuxullow oo kursigaan horay ugu fadhiyay, Cabdullaahi Cabdi Guutaale,Jamiilo Cali xeeyle, Iyo Cabdinuur Ciise xiireey, Waxaan loo saadalinayaa in mar labaad kusoo bixi doono Mustaf Shiikh Cali dhuxullow.
Kursiga Hop-#051 oo kamid ah kuraasta Maanta la qabanayo Doorashadooda waxaa kuwadda tartamaya, Xuseen Maxamed Nuur iyo Maxamuud Geedi Cawaale, waxaana loo saadaalinayaa in uu kusoo baxayo, Xuseen Maxamed Nuur,
Kursiga ugu danbeeyo Ee Hop-#061 oo uu horay ugu fadhiyay Cabdiwalli Qanyare waxaa kuwada Tartamaya, Dayax Axmed Cumar iyo Cabdiqadar Abuukar Cabdi, Waxaana loo saadaalinayaa in uu kusoo bixi doono Dayax Axmed Cumar
Turkiga oo muddo kordhin u sameeyay Ciidamada ka jooga Soomaaliya